जनकपुर–जटही ६ लेन सडकमा कतै गोबरको थुप्रो, कतै धान सुकाइँदै ! - Hamro Janakpur
जनकपुर–जटही ६ लेन सडकमा कतै गोबरको थुप्रो, कतै धान सुकाइँदै !
२०७८ बैशाख १६, बिहीबार १५:३८
जनकपुरधाम । जनकपुर–जटही सडकखण्डमा ६ लेनका चिल्ला सडकले बाटो गुल्जार देखिन थालेको छ । भारतीय बजार पस्ने जटही धनुषाको मुख्य नाका हुँदा तिब्र गतिमा मालवाहक र यात्रुवाहक गाडीको लर्को छ ।
तर वस्ती शुरुहुनसाथ सकडको बिचमै गोबर थुपारिएको छ भने कतै गुइँठा बनाइँदै छ । ठाउँ–ठाउँमा सडक छेकेर वैवाहिक कार्यक्रमकालागि पण्डाल सजाइँदै छ । विवाहको भोजभतेर पनि सडकमै हुँदैछ ।
भोजखाने थाली (पात) पनि सडकमै फ्याकिन्छ । नगराइन नगरपालिकामा स्थानीयहरुले सकडक छेकेरै गाइ, बाख्रा पालेका छन् । घाँस पराल समेत सडकमै राखिएको छ । लत्ताकपडा सडक पेटीमै सुकाइदै छ ।
सडकमै खाट राखेर बृद्धहरु आराम गर्दै छन् । बालबच्चा पनि सकडमै खेल्छन् र खानपीन समेत सडकमै हुन्छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२२ देवपुरा रुपैटास्थित सडक छेकेरै हाट बजार लाग्छ । बेलुका गाडी जाम लाग्ने स्थिती आउँछ ।
धान, गहुँ समेत सडकमै सुकाइन्छ । निर्माण समाग्री, कृषि उपकरण समेत सडकमै थन्क्याएको छ । जनकपुर–जटही सडकखण्डमा हिलाम्य र धुलाम्य जीर्ण सडकबाट छुटकारा पाएका यात्रुले स्थानीयको मनपर्दीका कारण सास्ती पाउन थालेका छन् ।
निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको चिल्ला र ६ लेनको फराकिलो सडक भएपनि सडक ढाकेरै गरिने घरेलु कामकाज र व्यापार व्यवसायले यात्रा जोखिमपुर्ण रहेको बस चालक रविन्द्र साहले बताए ।
‘सडक जति फराकिलो बनेको छ उतिकै साँगुरिदै गएको छ । सरसमान र व्यापारले बस चलाउन जोखिम छ । बच्चाहरु दिनभरी सडकमै खेल्छन्, बाख्रा पनि त्यतकै कुदेका हुन्छन्, साहले भने, ‘स्थानीयकै कारण कतिपटक ठूलो दुर्घटना हुनबाट बचेको छ तर तर ह्यावी गाडीले कतिखेर दुर्घटना होला ठेगान छैन् ।’
घरायसी कामकाज, हाट बजार र वैवाहिक कार्यक्रम समेत सडकमै आयोजना गरिदा सडक निर्माणसम्पन्न नहुँदै कुरुप बन्न थालेका छन् ।
सडकमै जताततै फोहोर थुपारिन थालिएको छ । घरमा समेत ठाउँ हुँदाहुँदै भौतिक पूर्वाधार निर्माण सामग्री सडकमै थुपारिदा सकड अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिको ध्यान पुग्न नसक्दा सडकमा सवारी र पैदल यात्रीले समेत समस्या भोग्नु परेको छ ।
स्थानीय तथा व्यापारीले फुटपाथ कब्जामा राखेकाले पैदल यात्री समेत जोखिम मोलेरै बीच सडकबाट हिड्न बाध्य छन् । ‘कताबाट हिड्ने ? सडक त खोली छोडेका छैनन्, फुटपाथ के छोडला । यस्तै हो जहिले लेखेको होला ठक्कर खाएरै मर्छु । यीनीहरुलाई कसले के भन्ने ?,’ नगराइनका विजेन्द्र यादवले भेन ।
घर छेउतीरका सडक त्यतीकै खाली रहेकाले घरायसी काममा उपयोग गर्दै आएको स्थानीयहरुको भनाइ छ । ‘गाडी चल्न यति फराकिलो छँदैछ । मैले मात्र सडकमा समान राखेको छु । जहिले भन्ला उहिलेदेखि बाख्रा बाध्दैनौ, कपडा सुकाउँदैनौ,’ स्थानीय अनिता मण्डलले भनिन् ।